Faah faahin:- Weerar culus oo saakay lagu qaaday Hoteel ku yaala koonfur galbeed Boosaaso – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Weerar culus oo saakay lagu qaaday Hoteel ku yaala koonfur galbeed Boosaaso
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa weerar aad u culus oo ay saakay koox hubeysan ku qaadeen Hoteelka International Village oo ku yaala koonfur galbeed magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Illaa 5 nin oo hubeysan islamarkaana loo maleynayo inay ka tirsan yihiin Al-shabaab ayaa saakay salaadii subax kadib weerar xoogan ku qaaday Hoteelkaas, iyagoona kadib dilay labo ka mid ah ilaalada Hoteelka.
Kooxahaasi ayaa la sheegayaa in markii dambe ay gudaha u galeen Hoteelka, iyagoona iska caabin kala kulmay ciidamo gudaha ku sugnaa oo ilaalo u ahayd guddoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Bari C/salaan Galan, kaas oo ka mid ahaa dadkii deganaa Hoteelka.
Ciidamo ka tirsan kuwa nabad-sugidda Puntland oo markii dambe soo gaaray Hoteelka ayaa ugu dambeyn ku guuleystay inay dilaan labo ka mid ah kooxihii weerarka soo qaaday.
Dadka ku dhintay weerarkaasi ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa labo ka mid ah illaada Hoteelka iyo labo kale oo ka tirsanaa ciidamadii ilaalada u aheyd guddoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Bari C/salaan Galan.
Xaaladda magaalada Boosaaso ayaa saakay ah mid kacsan, waxaana gudaha Hoteelka weli yaala meydadka labada nin ee dableyda ahaa iyo 4 ka mid ahaa illaada Hoteelka.
Si kastaba ha ahaatee, weerarkaan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo noociisa ah oo ka dhaca gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, iyadoona illaa iyo haatan aysan jirin cid sheegatay mas’uuliyada weerarkaas.